नुवाकोटका रमेशकुमार महत नेपाली काँग्रेस नेता हुन्, विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गर्दै आएका उनी नेपाली काँग्रेसले देश र जनताको पक्षमा केही राम्रा काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । नेपाली काँग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका उनले १४ मतअन्तरले सभापति हारे । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल हुँदै पार्टीको राजनीतिमा लागेका उनी समाजसेवामा पनि आबद्ध छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नुवाकोटको क्षेत्र नं. १ को (२) प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका उनले निर्वाचन जित्न सकेनन् । तर पनि राजनीतिमा भने सक्रिय रहेका छन् । जितहार भन्दा पनि जनताको मत ठूलो हो र यसको सम्मान गर्ने पक्षमा उनी छन् । एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएपछि काँग्रेसले आफूलाई नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगर्दा काँग्रेसले भनेजस्तो नतिजा नल्याएको उनको बुझाई छ ।
उनीसँग गरिएको समसामयिक कुराकानी यसप्रकार छ:
नेपाली काँग्रेस अहिले के गर्दैछ ?
नेपाली काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । नेकपा एमालेले सरकार बनाएको छ । उनीहरुले राम्रो काम गरुन् हाम्रो शुभकामना । हामीलाई विपक्षमा बस्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर हिजो उनीहरुले निर्वाचनमा जाँदा जे बचनबद्धता जनतामा गरेका थिए त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन हामी त्यसैको खबरदारी गर्छौ । राम्रो काम गरे समर्थन गर्छौ, देशघाती र जनघाती कामको विरोध गर्छौ । काँग्रेस हिजो पनि विपक्षमा बसेको थियो । विपक्षमा रहँदा के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान काँग्रेसलाई छ ।
काँग्रेस विपक्षमा बस्न सक्दैन भन्ने पनि आरोप छ नि ?
अरु पार्टीहरुले हामीलाई लगाएको आरोप हो यो ? २०४६ सालपछि पटक पटक काँग्रेस विपक्षमा बस्दै आएको छ । काँग्रेस सरकारमा रहँदा जनताको पक्षमा काम गर्छ र विपक्षमा हुँदा जनताको पक्षमा नै बोल्छ । यसअघि कम्युनिष्टहरुले धेरै पटक सरकार बनाएका छन् । उनीहरुले गलत काम गर्दा काँग्रेसले औंलो ठड्याएको छ । पटक पटक भएका जनआन्दोलनको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको छ तर हामी अरु पार्टीजस्तो प्रचार गर्न नजानेकाले काँग्रेसले केही नगरेजस्तो देखिएको हो । देशलाई नयाँ ढंगले परिवर्तन गर्ने काम काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा दायाँ बायाँ नगरीकन विपक्षमा बसेर पार्टी निर्माण र संगठन विस्तारमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा काँग्रेस किन कमजोर भयो ?
निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसले विपक्षीलाई कसरी कमजोर पार्दै जाने भन्ने सोच्न सकेन । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दीले पनि ठूलो असर गरेको छ । पार्टी निमाणको लागि धेरै व्यक्तिका समूह हुनु ठिकै हो तर यसले भने हामीलाई असर गरेको छ । समूहले पार्टीलाई विस्तार गरेर लान सक्नुपर्छ । पार्टी कमजोर भएको छ, अन्र्तघात बढेको छ, एकले अर्कालाई स्वीकार्ने पद्धतिमा ह्रास आएको छ । हाम्रो सरकारले जनताको पक्षमा केही राम्रा काम गरे पनि त्यो कुरा जनतामाझ लान सकेनौ । यो पनि एउटा हाम्रो कमजोरी पक्ष छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भएपछि एकातिर उहाँले पार्टीलाई चलाउन सक्नु भएन भने अर्कातिर कार्यकर्तामा पनि मनमुटाव बढ्दै गयो । काँग्रेसप्रति जनताको सोच र विचार राम्रै भएपनि ती कार्यकर्तालाई र शुभचिन्तकलाई पार्टीले समेट्न सकेन । काँग्रेसीको कमजोरीको कारण सर्वसाधारण जनतालाई मिठा र चिल्ला कुरा गरेर मत लगे । अब सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो मत पनि हामीतिरै फर्कने छ ।
अब काँग्रेसले लिनुपर्ने बाटो के हो ?
अहिले हामी नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेका छौं । संघीयता कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । यो प्रकृयामा धेरै खर्च बढेको छ । प्रशासनिक खर्च कसरी कमगर्ने र देश विकासमा कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सोच काँग्रेसमा पनि आउनु जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधारका प्रशस्त सम्भावना भएपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । काँग्रेसले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टी सँगसँगै देश बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । निर्वाचनमा किन हा¥यौं र अब कसरी जाने भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण नहुन्जेलसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ । आफूलाई अरुभन्दा राम्रो र राजनीतिक चरित्र बोकेको भन्ने केही मानिसहरुले काँग्रेसले चुनाव गराउँदै भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति आलोचना गरेका थिए । तर आफू हार्ने वा जित्ने भन्दा पनि देशले जित्नुपर्छ भनेर काँग्रेसले चुनाव गरायो । ०५१ सालमा र ०६४ सालमा पनि हामी हारेकै हौं तर पनि हामीलाई चिन्ता छैन । हारबाट पनि केही पाठ सिक्न सकिन्छ । यसपालिको प्रदेश निर्वाचनमा मैले पनि हारेँ । कसैलाई दोष दिन चाहन्न । स्थानीय चुनावमा टिकट नपाएका साथीहरुको केही असहयोग भयो । अर्कातिर आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिएन । सबैभन्दा ठुलो कुरा विपक्षीको गठबन्धन नै हाम्रो लागि घातक भयो ।
सरकारले देशमा आर्थिक संकट भएको भनेको छ ? तपाई पनि यो क्षेत्रसँग जानकार हुनुहुन्छ के त्यस्तै संकट आएको हो त ?
संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देश आर्थिक संकटमा फसेको र केही काम गर्न नसकिने बताउनुभयो । आफ्नो अवस्था जेजस्तो भएपनि संसदमा त्यसरी सम्बोधन गर्नु हुँदैनथ्यो । खर्च गर्दागर्दै अवस्था अलिकति कमजोर भएपनि त्यसरी सर्वस्व सकियो र देश टाट पल्टियो भन्नु हुँदैनथ्यो । ढुकुटी कहिले रित्तो हुन्छ कहिले भरि हुन्छ । रित्तो ढुकुटीमा अर्थ संकलन गर्न सरकारले केही राम्रा विकल्पहरु त्यार गर्नुपर्छ । युवालाई देशमै रोजगार दिनसक्नु पर्छ । उद्योग कलकारखानहरु सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । राजश्वका थप बाटाहरु सृजना गर्नुपर्छ । देशमा भएका साधनस्रोतको सही उपयोग गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ ।